Atụmatụ Ọdịnaya Modular maka CMO iji belata mmetọ dijitalụ | Martech Zone
O kwesịrị iju gị anya, ma eleghị anya ọ na-ewute gị, ịmara nke ahụ 60-70% nke ndị ahịa ọdịnaya na-emepụta aga ejighi ya. Ọbụghị naanị na nke a na-emebi emebi, ọ pụtara na ndị otu gị anaghị ebipụta ma ọ bụ kesaa ọdịnaya n'ụzọ dabara adaba, hapụ naanị ịhazi ọdịnaya ahụ maka ahụmịhe ndị ahịa.
Echiche nke ọdịnaya modular ọ bụghị ọhụrụ - ọ ka dị ka ihe nlereanya kama ịbụ nke bara uru maka ọtụtụ ụlọ ọrụ. Otu ihe kpatara ya bụ echiche - mgbanwe nhazi nke achọrọ iji nweta ya n'ezie - nke ọzọ bụ nkà na ụzụ.
Ọdịnaya modular abụghị naanị ụzọ aghụghọ, ọ bụghị ihe a ga-agbakwunye na ndebiri mmepụta ọdịnaya ma ọ bụ usoro njikwa ọrụ ka ọ dabere na ọrụ. Ọ na-achọ ntinye aka nhazi iji kwalite ụzọ ọdịnaya na ndị otu okike si arụ ọrụ taa.
Ọdịnaya modular, mere nke ọma, nwere ikike ịgbanwe okirikiri ọdịnaya niile wee belata akara ukwu nke ọdịnaya na-emebi emebi. Ọ na-agwa ma na-ebulikwa otu ndị otu gị:
Hazie, chepụta ma hazie ọdịnaya
Mepụta, chịkọta, jigharịa, ma jikọta ọdịnaya
Nhazi, ihe nlere anya, yana ọdịnaya echekwabara
Sochie, wee wepụta nghọta n'ime, ọdịnaya na mkpọsa
Ọ bụrụ na nke a dị ka ihe na-akụda mmụọ, tụlee uru ọ bara.
Forrester na-akọ na ijikwa ọdịnaya emegharị ihe site na ngwa modular na-enye ohere ka azụmaahịa chịkọta omenala - ma ahaziri ma ọ bụ nke mpaghara - ahụmịhe dijitalụ ngwa ngwa karịa ọdịnala, usoro ahịrị nke mmepụta na njikwa ọdịnaya. Ụbọchị ahụmịhe ọdịnaya nke otu na emela agwụla, ma ọ bụ opekata mpe, ha kwesịrị ịdị. Ọdịnaya modular na-enyere aka mee ka mkparịta ụka na-aga n'ihu na-aga n'ihu site na ntinye ọdịnaya gị na ndị na-ege gị ntị site n'inyere ndị otu aka ịrụ ọrụ na ngọngọ ọdịnaya na nhazi ọdịnaya ka ịgwakọta na megharịa ahụmịhe mpaghara ma ọ bụ ọwa akọwapụtara n'ime ntakịrị oge ọ ga-ewe na omenala. .
Kedu ihe ọzọ bụ na ọdịnaya ahụ kwụsịrị ịghọ onye na-enye ohere ịre ahịa na ngwa ngwa o kwesịrị ịbụ. Na-ekwu maka Forrester ọzọ
70% nke ndị na-ere ahịa na-eji n'etiti otu awa na 14 kwa izu na-ahazi ọdịnaya maka ndị na-azụ ha… [ebe] 77% nke ndị na-ere ahịa B2B na-akọkwa nnukwu ihe ịma aka na-ebuga nri ọdịnaya ziri ezi na ndị na-ege ntị na mpụga.
Ọ dịghị onye nwere obi ụtọ. N'ihe banyere elu:
Ọ bụrụ na nnukwu ụlọ ọrụ na-emefu ihe dị ka 10% nke ego ha nwetara na ahịa, ọnụ ahịa ọdịnaya bụ 20% ruo 40% nke ahịa, na ijigharị ya na-emetụta naanị 10% nke ọdịnaya kwa afọ, enweelarị ego nchekwa ego nde dollar.
Maka CMOs, ihe kacha emetụta ọdịnaya bụ:
Ọsọ n'ahịa – kedu ka anyị ga-esi jiri ohere ahịa na-eme ihe, na-eleba anya n'ihe na-eme ugbu a mana ọ bụkwa isi mgbe ihe ndị a na-atụghị anya ya bilitere.
Belata ihe egwu - ihe okike nwere ọdịnaya niile akwadoro tupu ha adị njikere ịga belata nyocha na nkwenye wee nweta akara ngosi, ọdịnaya kwekọrọ na ahịa n'oge? Kedu ihe ga-eri aha aha ọjọọ? Ọ na-ewe naanị otu ahụmịhe iji gbanwee echiche nde mmadụ (nduru).
Belata ihe mkpofu - Ị bụ onye mmetọ dijitalụ? Kedu ụdị profaịlụ mkpofu gị n'ihe gbasara ọdịnaya ejighi ya? Ị ka na-agbaso usoro ndụ okirikiri ọdịnaya toro ogologo?
Nhazi nke enwere ike itughari – Ewubere sistemu anyị iji kwado nzụkọ na-abụghị nke ahịrị nke ahụmịhe onwe onye n'ofe ọwa dabere na mmasị, akụkọ ịzụrụ, mpaghara ma ọ bụ asụsụ? Ị nwere ike ịmepụta ọdịnaya nke ọma iji mee ihe n'oge mkpa dị iche - nke emere maka gị oge - kamakwa hụ na nrubeisi, akara, na njikwa na mmesi obi ike n'ofe ndụ ọdịnaya na-enweghị usoro na-agwụ ike, na-ewe oge?
Ntụkwasị obi na nchịkọta martech gị - Ị nwere ndị mmekọ teknụzụ siri ike na ndị mmeri azụmaahịa? Ma, dị ka ọ dị mkpa, a na-ejikọta data gị n'etiti ngwa ọrụ gị? Ị na-eme ihe omume iji kpughee nkọwa ndị ruru unyi wee mee ohere maka njikwa mgbagwoju anya na mgbanwe nhazi nke achọrọ iji kwado teknụzụ ahịa gị na azụmahịa ahụ?
N'elu ihe a niile, onye isi ahịa ahịa (Chief Marketing Officer's)CMO) ọrụ bụ ịkwaga ika gị site na nkezi gaa na ọgụgụ isi. Ma ị gara nke ọma ma ọ bụ na ị gaghị eme nke ọma, otu ị ga-esi na-eme ya, bụ ntụgharị uche kpọmkwem na CMO n'onwe ha - otú ha si ejikwa isi obodo ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ebe ha nọ na c-suite, ikike ha nwere igbutu ma ọ bụ kpochapụ ọrụ na ozi na-adịghị mma, na N'ezie n'efu, na otu esi enyocha ihe niile na maapụ maka otu na azụmahịa ịga nke ọma.
Ike, visibiliti, na nghọta achọrọ na ngbanwe uche a gafere mmepụta ọdịnaya na ahụmịhe dijitalụ. Nlereanya a na-akwalite ebumnuche, atụmatụ ịre ahịa ọdịnaya nwere ebumnuche yana ọdịnaya dị elu site na iji akụrụngwa ole na ole, yana ihe niile arụpụtara iji kwado ahụmịhe ọ bụla, ọdịnaya micro-content gị ma ọ bụ ihe mgbochi modular, na-aghọ ndị na-abawanye ụba ka ị nweta ọdịnaya kachasị mma n'ofe ndị na-ege gị ntị.
Site n'iji ọdịnaya modular dị ka ihe na-akwalite mgbanwe, maka ụzọ ọrụ ọhụrụ, ị na-ewepụta ihe na-agaghị ekwe omume na mbụ maka nnukwu ụdị ụdị ịmezu. Ọ na-agafekwa oke scalability - ị na-enyere ndị otu gị aka ka ha na-elekwasị anya n'ọdịnihu, ị na-ebuli ihe okike gị iji belata ike ọgwụgwụ na nhazi nhazi. Ị na-ewere ọnọdụ n'itinye aka na ọdịnaya nke dị mkpa dị ka ngwaahịa na ọrụ ị na-ere, na n'ikpeazụ, ị na-etinye nkwa iji kwụsị ihe mkpofu ma hụ na ozi gị, ọhụụ gị, na njirimara njirimara gị, emela. ụda mmetọ dijitalụ na-ejupụta.
Tags: aprimoKedundụ okirikirimmepụta ọdịnayanjikwa oru ngo ọdịnayaatụmatụ ọdịnayaọdịnaya ọdịnayaọdịnaya modularatụmatụ ọdịnaya modularweghachite ọdịnaya
Okwu akwụkwọ edemede: Site na Apex ruo Swash na Gadzook dị n'etiti… Ihe niile I Kwesịrị Ịma Banyere Fonts